एआइजी चन्दको नाम बदनाम गराउदै धन्दा चलाउनेहरु को-को फसे ? — Imandarmedia.com
गत असोज ९ गते साँझ महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा अख्तियारले छापा मा¥यो । प्रहरीका केही अधिकृत जवानहरुले सेवाग्राहीसँग घुस लिन लागेको सूचनाको आधारमा बालाजु पुगेको अख्तियारका डीएसपी हेम थापा नेतृत्वको टोलीले बालाजु वृत्तमा छापा मारेको थियो । त्यसबेला सेवाग्राहीसँग ५ लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा असई चन्द्रसिंह भाट, प्रहरी जवान पुस्कर शाह र आफूलाई प्रहरी दाबी गर्दै हिँड्ने बालुवा डिपो सञ्चालक विनोद थापालाई रंगेहात पक्राउ गर्न सफल भयो ।
अख्तियारले छापा मार्दै गर्दा भाग्न सफल भएका प्रहरी जवान मनोज यादवलाई अख्तियारले केही दिनपछि पक्राउ गरेको थियो । उक्त घटनामा संलग्नताको आरोप लागेपछि वृत्तका डीएसपी नवीनकृष्ण भण्डारीलाई अख्तियारको टोलीले कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको थियो । उनीहरु सबै अहिले निलम्बनमा छन् । उनीहरुको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
वृत्तको ठाडो उजुरी शाखामा कार्यरत असई भाटलाई पक्राउ पर्नुभन्दा एक हप्ता अघिमात्रै घुमुवाको रुपमा सादा पोशाकमा काममा लगाउन महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एआईजी जयबहादुर चन्दले डीएसपी भण्डारीलाई निर्देशन दिएपछि उनी सादा पोशाकमा खटिएका थिए ।
एक व्यक्तिलाई अपहरणको शैलीमा बन्धक बनाएर रकम असुली गरेपछि डीएसपी भण्डारीबाहेक अन्य सबैविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा लगाइएको छ । उक्त घटनामा जोडिएका प्रहरी जवान यादव एआईजी चन्दका विश्वासपात्रको रुपमा चिनिन्छन् । चन्द पर्साको एसपी हुँदा यादव उनकै घुमुवा थिए । गत वर्षको फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा आईजीपी विवादसम्बन्धी मुद्दा चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सुराकी गर्न असई भाटलाई एआईजी चन्दको निर्देशनमा खटाइएको थियो ।
समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसबेला सादा पोशाकमा काम गर्दै गरेका भाटलाई तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी छविलाल जोशी र बालाजुका वृत्तका तत्कालीन डीएसपी सन्तोष तामाङले सख्त चेतावनी दिँदै बर्दी लगाएर ड्युटीमा खटाएका थिए ।
त्यसयता, बर्दी लगाएर नियमित ड्युटि गर्दै आएका भाट महानगरीय प्रहरी प्रमुखमा चन्दको पदस्थापन भएपछि असुलीधन्दामा लागेका थिए । पक्राउ पर्नुभन्दा एक हप्ताअगाडि एआईजी चन्दको निर्देशनमा भाटलाई घुमुवाको रुपमा खटाइएको थियो । त्यसबेला पक्राउ परेका प्रहरी जवान शाह पनि चन्दका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।
सुशासन साप्ताहिक लेख्छ बालाजु वृत्तको घटना सेलाउन नपाउँदै महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुंगामा अर्को घटना घट्न पुग्यो । एआईजी चन्दले खटाएका सई देउबहादुर चन्द र प्रभागका प्रमुख इन्स्पेक्टर ऋषिराम घर्तीमगर बीचको विवाद छताछुल्ल भयो । इन्स्पेक्टर घर्तीमगरलाई कारबाही गराएर प्रभागको निमित्त प्रमुख बन्ने सपना बोकेका सई चन्दले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिए । त्यसलगत्तै भएको इन्स्पेक्टर सरुवा घर्तीमगरको त्यहाँबाट स्याङ्जा सरुवा भएपछि सई चन्दले विभिन्न तस्करीका समूहसँग साँठगाँठ गर्दै लाखौं रकम असुल्न थाले ।
रकम असुली गरेको प्रमाणसहित महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी परेपछि काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रवीन्द्रसिंह धानुकले छानबिन सुरु गरे । छानबिनको क्रममा सई चन्दको संलग्नता पुष्टि भएपछि एसएसपी धानुकले उनलाई निलम्बनको तयारी गर्दै थिए, तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई सर्लाहीमा काज सरुवा गरिदियो ।
काज सरुवा भएता पनि निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै एसएसपी धानुकले सई चन्दलाई रमाना नदिन महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका डीएसपी महेन्द्र नेपाललाई निर्देशन दिएका थिए । तर, डीएसपी नेपालले चन्दमाथि अनुसन्धान हुँदा आफूसमेत फस्ने डरले रातारात रमाना गरेको स्रोत बताउँछ ।
स्रोतका अनुसार थानकोट नाका हुँदै काठमाडौं भित्रिने तस्करीको लाइन डीएसपी नेपाल र सई चन्दको मिलेमतोमा चल्दै आएको थियो । यथार्थ छानबिन हुँदा आफैं फस्ने डरले रातारात रमाना दिने डीएसपी नेपाललाई एसएसपी धानुकले मौखिक चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘निलम्बन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई किन रमाना दिएको, कसको आदेशमा दिएको ? यो केशमा म तिमीलाई पनि कारबाही गर्छु,’ एसएसपी धानुकले डीएसपी नेपाललाई चेतावनी दिँदाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । काठमाडौं प्रहरी प्रमुखले निलम्बन तयारी गर्दैगर्दा सई चन्दलाई महानगरीय प्रहरीका एआईजी चन्दको ठाडो निर्देशनमा कारबाहीबाट बचाउन रमाना गरिएको उच्च स्रोत बताउँछ ।
यही माघ ८ गते महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) रेशमबहादुर खड्कालाई ३ लाख रुपैयाँ घूससहित काठमाडौंको बालाजुबाट अख्तियारको टोलीले पक्राउ ग¥यो । एआईजी चन्दनिकट मानिने उनी महानगरीय प्रहरीको कन्ट्रोल शाखामा कार्यरत थिए । माथि उल्लिखित विभिन्न घटनामा पक्राउ पर्ने र कारबाहीको दायरामा आउने अधिकांश प्रहरी जवानहरु एआईजी चन्दनिकट देखिन्छन् । तर, यस्ता विभिन्न घटनामा सम्बन्धित प्रहरीमात्र कारबाहीको दायरामा पर्ने तर उनीहरुलाई कमाण्ड गर्ने प्रहरी अधिकृतहरु कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । यसमा अख्तियार तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि खासै चासो दिएको देखिँदैन ।
माथि उल्लिखित घटनाहरु सुन्दा सामान्य तथा आचरण विपरीतका छन् । तर, पछिल्लो समय चन्दकै एक विश्वासपात्र बलात्कार जस्तो जघन्य घटनाका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिएको घटनामा मुछिएका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु दरबन्दी भएका इन्स्पेक्टर लक्ष्मणसिंह ठकुरी गतवर्ष आफ्नो दरबन्दीमा हाजिर हुन बालाजु पुगे । आफू दरबन्दीमा हाजिर हुन आएको भन्दै बालाजुका तत्कालीन डीएसपी सन्तोष तामाङसमक्ष पुगेका ठकुरीलाई तामाङले हाजिरै हुन दिएनन् । कारण थियो, ठकुरीको आचरण ठीक छैन, उनी गैरव्यावसायिक अधिकृत हुन् भन्नेमा डीएसपी तामाङ जानकार थिए ।
सोही कारण तामाङले तत्कालै महानगरीय प्रहरीका तत्कालीन निमित्त प्रमुख डीआईजी बमबहादुर भण्डारीलाई रिपोर्ट गरे, ‘यो इन्स्पेक्टर बद्मास छ, उनलाई यहाँ हाजिर गराए मलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ सर, उनलाई अन्यत्रै सरुवा गरिदिनुप¥यो ।’ डीएसपी तामाङको अनुरोधपछि भण्डारीले इन्स्पेक्टर ठकुरीलाई दरबारमार्ग वृत्तमा हाजिर हुन पठाउन निर्देशन दिए ।
दरबारमार्गमा हाजिर भएपछि तत्कालीन डीएसपी कृष्णबहादुर पल्लीमगरको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै आर्थिक प्रलोभनमा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन थाले । यस्तै क्रम चलिरहँदा ग्राहक लुट्ने दरबारमार्ग क्षेत्रका रात्रिकालीन व्यवसायीहरुलाई संरक्षण गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालयले उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटी सरुवा गरेको थियो । तर, तत्कालीन डीआईजी भण्डारी एआईजीमा बढुवा भएर प्रहरी मुख्यालय गएपछि उनको ठाउँमा एआईजी चन्दको पदस्थापन भएको थियो । चन्दको पदस्थापनपछि केही महिनाअगाडि काठमाडौंको दरबारमार्गमा अवस्थित शेर्पा मलको एक रेष्टुरेण्टमा एआईजी चन्दनिकट मानिने एक सञ्चारकर्मीलाई इन्स्पेक्टर ठकुरीले भेटेका थिए ।
त्यसको दोस्रो दिन ती सञ्चारकर्मीले ठकुरीलाई लगेर एआईजी चन्दलाई भेटाइदिएका थिए । चन्दको मन पग्लियो र तुरुन्तै ठकुरीलाई दरबारमार्ग वृत्तमा हाजिर गराउन आदेश दिए । चन्दको ठाडो आदेशमा दरबारमार्ग पुगेका ठकुरीलाई हटाउन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी धानुकले अत्यन्तै जोडबल गरे तर उनी सफल भएनन् ।
यसै क्रममा माघ ११ काठमाडौंको कमलादीमा रहेको होटल ल्याण्डमार्कमा सामूहिक बलात्कारको घटना घट्यो । घटनाको पीडित पक्ष युवतीले दरबारमार्ग वृत्तमा उजुरी गर्ने प्रयास गरे पनि प्रहरीले उजुरी लिनै अस्वीकार ग¥यो । बरु पीडक र पीडित पक्षलाई रकम लेनदेन गराएर घटनालाई मिलाउने प्रयास ग¥यो । यो प्रकरणमा इन्स्पेक्टर ठकुरीले नेतृत्व गरे । उनकै मध्यस्थतामा पीडित युवती र पीडक पक्षलाई मिलापत्रको कागजपत्र गराइयो ।
युवतीलाई बयान फेर्न लगाउनेदेखि पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउने क्रममा उनले मोटो रकम बार्गेनिङ गरेको आरोप छ । यही कारण उनलाई अहिले प्रहरी मुख्यालयको १ नम्बर गणमा नजरबन्द गरी राखिएको छ । शुक्रबार महानगरी प्रहरी परिसरमा ठकुरीको बयान लिइएको थियो । प्रहरीको बर्दीमै परिसर पु¥याइएका ठकुरीलाई एसपी रामदत्त जोशी र डीएसपी बेलबहादुर पाण्डेले बयान लिएका थिए ।
बयानपश्चात् शुक्रबारै परिसरले उनलाई निलम्बनका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालयमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सिफारिश गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखाले आज आइतबार निलम्बनका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । उक्त घटनामा मुद्दा फाँटका सई चन्द्र भण्डारीलाई निलम्बन गरिसकिएको छ भने वृत्तका डीएसपी तिलक भारतीलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरमा तानिएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार इन्स्पेक्टर ठकुरीले एआईजी चन्दको नाममा दरबारमार्ग क्षेत्रका थुप्रै व्यवसायीसँग लाखौं रकम असुलेको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसरमा मौखिक उजुरी परेको छ । उक्त घटनामा परिसरले एसपी रामदत्त जोशी, डीएसपीहरु शेखर खनाल, बसन्त रजौरे, बेलबहादुर पाण्डे र इन्स्पेक्टर अनिल अधिकारी सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरेको छ भने महानगरीय प्रहरी कार्यालयले पनि छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
उक्त समितिमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयका एसएसपी पूर्णचन्द्र जोशी, एसपीहरु राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, राजेन्द्र विष्ट र डीएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरलगायत अधिकारीहरु रहेका छन् ।